एक दृष्टिविहीन फोटोग्राफरको आँखाले कसरी देख्छ विश्व ? | Ratopati
Home रातोपाटी 2018-12-13T19:10:33.663653+05:45
एक दृष्टिविहीन फोटोग्राफरको आँखाले कसरी देख्छ विश्व ?
‘तपाई मलाई अपाङ्ग भन्नुको सट्टा अन्धा नै भन्नुहोस् । जब मलाई नै अन्धो भन्न वा मान्नमा लाज लाग्दैन भने तपाईंलाई भन्न किन अप्ठेरो लागिरहेको छ ?’
३८ वर्षका प्रणव लाल देख्न सक्दैनन् । उनी जन्मजात दृष्टिविहीन हुन् । तर, उनी फोटा खिच्छन् । साइबर सुरक्षा विशेषज्ञको रुपमा काम गर्छन् । र, हरेक दिन कुनै नयाँ प्रविधि, एपमा काम गर्छन् । उनी ब्लग पनि लेख्छन् र मिनेट–मिनेटको हिसाब राख्छन् ।
यदि तपाईले उनलाई ११ बजेर ३० मिनेटमा भेट्ने भनेर भन्नुभयो तर, भेट्दा ११ बजेर ३५ मिनेट भयो भने उनले तपाईलाई भन्नेछन्, ‘तपाईं भनेको समयभन्दा ५ मिनेट ढिला हुनु भयो । ’
प्रणव देख्न सक्दैनन तर उनको कथा करुणा रसले भरिएको छैन, वीर रसले भरिएको छ । त्यसैले यो कथा कुनै पीडितको होइन ।
भनाइ छ नि ‘मनले हारे हार हुन्छ, मनले जिते जित ।’ प्रणव यसका उदाहरण हुन् । उनी भन्छन् ‘म देख्न सक्दिन यो यस्तो सत्य हो जसलाई म परिवर्तन गर्न सक्दिन । त्यसकारण म यसैलाई सम्झेर आँशु बहाउनुभन्दा अथवा दुःखी भएर बस्नुभन्दा राम्रो हो यो दुःखसँग संघर्ष गर्नु ।’
प्रणवकी आमा भन्छिन्, ‘जब प्रणवको जन्म भयो । मलाई थाहा भयो कि उनी देख्न सक्दैनन् ।’ उनलाई दुःख त लाग्यो तर गुनासो थिएन ।
‘हामीलाई कहिले गुनासो भएन । तर प्रणवको बुबालाई लागेको थियो कि उनको छोराले आफ्नो हजुरबुवा र बुबाले पढेका पुस्तक पढन् सक्ने छैन । प्रणवका बुबाले ती सबै पुस्तक अरुलाई दिने योजना बनाएका थिए, तर प्रणवले त्यसो गर्न दिएनन् । त्यसपछि स्क्यानर आयो । जसको मद्दतले उसले एक एक पुस्तक पढ्यो । त्यसपछि प्रणवले आफ्नो बुबालाई भन्यो अब यी पुस्तक जसलाई दिने हो दिनुहोस् ।’
प्रणव पनि यस्ता आमाबाबु पाएकोमा आफूलाई भाग्यमानी ठान्छन् । उनीहरुले कहिले आफूलाई दृष्टिविहीन जस्तो महसुस हुन नदिएको र बन्धनमा नराखेको उनी बताउँछन् ।
प्रणव भन्छन् ‘मैले स्वयं कहिलेपनि हार मानिँन जसले चुनौति पनि धेरै ठूलो लागेन । यद्यपि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान भने समस्या हुन्थ्यो । यसबाहेक गणितमा समस्या हुन्थ्यो किन त्यसलाई सुनेर हल गर्न सकिँदैन थियो ।’
प्रणव कहिल्यै दृष्टिविहीनका लागि बनेको विशेष स्कूलमा गएनन् । उनले सधैँ सामन्य स्कूल र कलेजमा पढे ।
फोटोग्राफर बन्ने सोच
‘यसको पछाडि कुनै ठूलो कारण छैन । केवल म मान्छेहरुको अगाडि ती फोटाहरु राख्न चाहन्थे जुन फोटो म मात्र देख्न सक्थे ।’
ल्याण्डस्केप्स फोटोग्राफीमा रुची राख्ने प्रणवलाई मान्छेहरुको फोटा खिच्ने त्यति मन पदैन ।
आफ्नो ड्रिम प्रोजेक्टको बारेमा कुरा गर्दै उनी भन्छन् ‘म इन्टरनेशनल स्पेस स्टेशनबाट पृथ्वीको फोटो खिच्न चाहन्छु । यसबाहेक बलिरहेको ज्वालामुखिको क्रेटरको पनि फोटो खिच्न चाहन्छु ।’
मलाई लाग्यो कि म त्यो देखाऊँ जुन केवल ममात्र देख्न सक्छु, अरु कोहि होइन ।’
‘ल्याण्डस्केप्सको फोटा खिच्नु मलाई सबै भन्दा मनपर्छ ।’
प्रणव आवाजलाई आधार बनाएर फोटो खिच्छन् ।
उनले कुनै प्रोफेशनल तालिम लिएका होइनन् । जुन उपकरण उनले प्रयोग गर्छन् । ती पनि उनी स्वयम्ले बनाएका हुन् ।
प्रणव भन्छन्, ‘म कुनैपनि मान्छेलाई देख्दिँन तर कुरा त गर्न सक्छु । जो मान्छेले देख्छन् उनीहरु मान्छेको रंग, शरीरको आधारमा आफू सामु भएको मानिसको
बारेमा धारणा बनाउँछन् । तर म कसैलाई देखेर होइन उसँग कुरा गरेर निश्चित गर्छु कि त्यो मान्छे कस्तो छ ।’
कसरी खिच्छन् फोटो ?
‘म फोटो खिच्नको लागि कुनै विशेष किसिमको प्राविधिको प्रयोग गर्दिँन । म मात्र लाइभ इमेजको आवाजको माध्यमबाट सम्झन्छ्ु ।’
‘म कानमा एउटा डिभाइस लगाउँछु । जसले म अगाडि राखेको वस्तु कहाँ छ भनेर बुझाउँछ । यदि कुनै चिज बाँयातर्फ छ भने बाँया कानमा आवाज आउन थाल्छ । यदि कुनै चिज दाँया तर्फ छ भने दाँया कानमा आवाज आउन थाल्छ । आवाजको पिचबाट मलाई अगाडि भएको चिजको उचाइ थाह हुन्छ । आवजको तिव्रताबाट मलाई ब्राइटनेस पनि थाह हुन्छ । आवाज जति बढी हुन्छ ब्राइटनेश पनि बढी हुन्छ ।’
के सोच्छन् उनका आमा बुबा ?
प्रणवकी आमा प्रणवलाई कहिल्यै पनि आफूले उनले देख्न सक्दैन भनेर नहुर्काएको बताउँछिन् ।
‘बाल्यकालदेखि नै उसले आफ्ना सबै काम आफैले गथ्र्यो । म केबल उसको कपडा भएको दराज ठीक गर्छु । बाँकी सबै काम आफै गर्छ । मलाई उसको कारणले
कहिल्यै दुःख भएन । मात्र एक गुनासो छ, ऊ समयको यति पक्का छ कि उसले अरुलाई पनि त्यस्तै बनाउँछ ।’
‘कहिलेकाहीँ उसको यो बानीबाट हैरान हुन्छु,’ प्रणवकी आमा भन्छिन्, ‘तर ऊ नै विश्वको सबैभन्दा असल छोरा हो ।’
"दि भ्वाइस अफ नेपाल"को ग्राण्ड फिनाले शुक्रबार, कसले मार्ला बाजी"
गतहप्ता केही फ्ल्यास प्वईन्टहरुमा घटेका घटनाहरुले विश्व व्यवस्था परिवर्तन गर्ने संकेत
भक्तपुरमा अधिकांश औषधी पसल दर्ताबिना सञ्चालन
मोवाईल चोरी गर्ने कार्यमा संलग्न ४ जना पक्राउ